सानिमा ब्यांकले ल्यायो दराजसँग मिलेर नयाँ अफर
नयाँ वर्षको अवसरमा सानिमा ब्यांकले ‘नयाँ रहर, नयाँ अफर’ योजना ल्याएको छ।
सानिमा ब्यांकको केवाईसी अनलाइनबाटै अद्यावधिक गर्न सकिने
सानिमा ब्यांकले व्यक्तिगत विवरण (केवाईसी) अनलाइनबाट नै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई ब्यांकका तीन नयाँ शाखा सञ्चालन
ग्लोबल आइएमई ब्यांक लिमिटेडले तीनवटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सोलुखुम्बुमा ग्लोबल आईएमईको शाखारहित ब्यांकिङ सेवा ग्लोबल आइएमई ब्यांक लिमिटेडले सोलुखुम्बुकोे फाप्लुमा नयाँ शाखारहित ब्यांकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
घर कर्जा प्रवाह गर्न ग्लोबल आईएमई ब्यांक र बोधि होल्डिङबीच सम्झौता सहुलियत दरमा आवासीय घर कर्जा प्रवाह गर्न ग्लोबल आइएमई ब्यांक लिमिटेड र बोधि होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडबीच समझदारी भएको छ।
ग्लोबल आईएमई ब्यांकद्वारा ऋणपत्र निष्कासन ग्लोबल आईएमई ब्यांक लिमिटेडले ‘८.५ प्रतिशत ग्लोबल आइएमई ब्यांक डिबेन्चर २०८६/८७’ निष्कासन गरी बिक्री खुला गरेकोे छ।
अब एउटा ब्यांकको कार्डले अर्को ब्यांकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने
एउटा ब्यांकको एटीएम कार्डले अर्को ब्यांकबाट रकम निकाल्दा अब शुल्क लाग्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै यसअघि नि:शुल्क रहेको यस्तो कारोबारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लगाउनसक्ने बाटो खोलिदिएको हो।
सहकारीमा झण्डै रू. ५ खर्ब बचत संकलन, ८८ हजारलाई रोजगारी
देशैभरका २९ हजार ८८६ सहकारी संस्थाले रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ बचत संकलन गरेका छन्।
ऋणीको जग्गा सस्तैमा हडपेको एनआईसी एशियाको एउटै मुद्दा लड्न २३ जना वकील, मुद्दा भने सारेको सार्‍यै
ओरियन्टल बिल्डर्सको २४ रोपनी जग्गा र बहुतल्ले भवन संरचना कौडीको मोलमा हत्याएको एनआईसी एशिया ब्यांकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न लगातार पेशी सारिरहेको छ ।
‘कर्पोरेट–पे’ प्रणालीका लागि एनआईसी एशिया ब्यांक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता एनआईसी एशिया ब्यांक लिमिटेडले आफ्ना संस्थागत ग्राहकका लागि ब्यांकक खाताबाटै विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने ‘कर्पोरेट–पे’ प्रणालीको शुरूआत गरेको छ। ब्यांकले नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)सँग सम्झौता गरेको छ।
शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र ब्यांकको कडाई, कोभिड–१९ प्रभावित ऋणीको धितो लिलाम नगरिने नेपाल राष्ट्र ब्यांकले शेयर धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा केही कडाई गरेको छ। बुधबार निर्देशन जारी गर्दै ब्यांकले शेयर धितो कर्जामा कडाईसहितका व्यवस्था गरेको छ।
सनराइज ब्यांकका ग्राहकलाई सिद्धार्थ गुप्र अफ हस्पिटालिटीमा विशेष छुट सनराइज ब्यांकका ग्राहकले सिद्धार्थ गुप्र अफ हस्पिटालिटीमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। सनराइज ब्यांक लिमिटेड तथा सिद्धार्थ गुप्र अफ हस्पिटालिटीबीच ब्यांकका ग्राहकहरूलार्ई विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।